Isikhokelo sokwenza umgquba: Iingcebiso kunye namacebo malunga nokwenza umgquba- Ikkaro
yokuqalisa >> Igadi >> Ukwenza umgquba
Ukudityaniswa komxholo onxulumene nokwenza umgquba kunye nokwenza umgquba.
Kweli candelo uza kubona:
Ulwazi malunga nomgquba nendlela yokwenza umgquba.
Amakhomputha, ikhaya kunye nentengiso
Izixhobo kunye nezinto ezisetyenziselwa ukwenza umgquba.
Ukwenza izixhobo zokuchumisa ekhaya
Amaqhinga kunye namava okwenyani, ndicacisa indlela endenza ngayo umgquba wam
Uyisebenzisa kanjani icompost esiyifumanayo
Yintoni umgquba? Kukubola kwezinto eziphilayo eziba ngumgquba.
Indlela yokwenza umgquba
Ndibuyela kumxholo wokwenza umgquba kwezinye iividiyo endizibonileyo UCharles Dowding esekwe kwifilosofi yeNo Dig, No Dig (esiza kuthetha ngayo kwelinye inqaku). Idowding isebenzisa kuphela umgquba egadini yayo. Umgquba kuyo yonke into. Kwaye ikufundisa ukuba niyile kwaye niyisebenzise kwaye njengesityalo kwaye ninyamekele igadi yenu.
Iindlela zokupheka zomgquba Zininzi, nangona zonke zisekwe kumgaqo ofanayo kodwa nganye iyenza ngendlela yazo.
Ndikhe ndabona kwaye ndafunda uninzi lomxholo onxulumene noko kwaye kukho abantu abazama ukukhawulezisa kangangoko kunokwenzeka ukwenza inkqubo ikhawuleze, abanye bongeza inyama, nokutya okuseleyo okuphekiweyo, kodwa andikuboni oko. Ukongeza inyama kubonakala kuyimpazamo kolu hlobo lokubola kwe-aerobic, enye into kukuba umgquba ovela kwinkunkuma eqinileyo yasezidolophini, ezinje ngezo ziqokelelwe emigqomeni, kodwa zihlala zenziwa ngeenkqubo ze-anaerobic kwaye sithetha ngento eyahluke ngokupheleleyo.
Uyenza njani icompact eyenzelwe ekhaya kunye neepelethi
Ndiqalile yenza umgquba kwaye ndenzile Umhlanganisi olula kakhulu owenziwe ekhaya ngeepelethi. Ndishiya ezinye iifoto kunye nezinye izichazi ezincinci ukuze ubone ukuba ndiyenze njani kwaye ekugqibeleni kwinqaku uza kubona enye imodeli eyenziwe ngeepelethi, elinganisa imigqomo yomgquba.
Ndisebenzisa iipelethi ezindala ebendizisebenzisa kwakhona ebantwini okanye kwiinkampani ezaziza kuzilahla.
Ubungakanani endikhe ndazisebenzisa ziipelethi ze-Euro, ke sele uyazi imilinganiselo ye-1,20 × 0,8 m ukwenzela ukuba umgqomo womgquba ube nesiseko se-1m x 0,8m ukuphakama.
Uyenza njani into yokuba umhlanganisi owenzele ekhaya ngegubu
Ndinombono we yenza isichumisi esenziwe ekhaya ukuthatha inkunkuma yemifuno ekhitshini.
Ndifuna ukuphanda ngakumbi malunga iaerobic, anaerobic kunye neermicomposters. Ke ndiza kukushiyela ulwazi, iintlobo ezahlukeneyo zabadlali endizifumanayo kunye neemvavanyo ezithile endizenzayo.
Imingxunya yegubu yenzelwe ukuba ibe nomoya opholileyo kwaye nezinto eziphilayo zigalelwe kakuhle.Nangona kunjalo, ndibona iziphene ezininzi kolu hlobo lomgquba.